देउवाको चित्त - परिहास - नेपाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अपमान भएको हल्लाले पनि राजनीतिलाई एकछिन तरंगित नै पारिदियो । अपमान भएकामा देउवाभक्तहरुले धेरै नै आलोचना गरे । तर पछि देउवा स्वयंको वक्तव्य आएपछि भने आलोचकको आलोचना पनि ठप्पै भयो । कुनै पनि आलोचना आएन । आफ्नो भनाइमा देउवाले स्पष्टै भनेका छन्- राष्ट्रपतिको कुराले मेरो चित्त पटक्कै दुःखेको छैन ।
वास्तवमा कुरा सही पनि हो । राष्ट्रपतिको भनाइका कारण देउवाले चित्त दुःखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । चित्त त बरु उनको आफ्नै पार्टीका नेताहरुका कारण दुःखिरहेको छ । राष्ट्रपतिले त के नै भनेकी छन् र ? त्योभन्दा कडा त आफ्नै नेता-कार्यकर्ताले भनिरहेका छन् । चित्त त यसमा पो दुःखिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिले त यति मात्रै भनेकी हुन्, माइकमा बोलेको (देउवाले ?) कुरा अलि बुझिँदैन । अब यसमा के आपत्ति ? देउवाको कुरा त उनका आफ्नै नेताहरुले समेत अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने केहीले उनको कुरा साँच्चै नबुझेकै हो, केहीले बुझिसके पनि बुझेँ भनिरहेका छ्रैनन् । केहीले चाहिँ बुझ्नै चाहिरहेका छैनन् ।
स्थिति यो छ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले केही बुझिनँ भनेर के पो अपराध गरेकी छन् र ? आफ्नै कार्यकर्ताले आजसम्म नबुझेको कुरा राष्ट्रपतिले कसरी बुझ्नु?